Facebook မပေါ်ခင်က ကျွန်တော်တို့ တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်လို Unfriend လုပ်ကြလဲ? – Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	နည်းပညာ, Lifestyle	 September 21, 2019 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
အခုခေတ်မှာတော့ Facebook ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက လူအများစု အတွက် အင်တာနက်ပေါ်မှာ မရှိမဖြစ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီFacebook ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ရက်ကို သုံးတာဟာ လူသားတွေ ဖြစ်တာကြောင့် တယောက်နဲ့ တယောက် စိတ်အခန့်မသင့် ဖြစ်ကြတဲ့အခါ Facebook မှာ Unfriend တွေလုပ် Block တွေ လုပ်ကြပါတယ်။ Facebook မပေါ်ခင်ကရော ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုများ Unfriend လုပ်ကြလဲ?
မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အုပ်စုလိုက်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံမှာ ကိုယ်ကြည့်မရတဲ့သူ မျက်နှာကို ဓာတ်ပုံထဲကနေ လှီးထုတ်ပစ်လိုက်တာ၊ တခုခုနဲ့ ခြစ်ပစ်လိုက်တာ၊ ဘောပင်နဲ့ အပေါက်ဖောက်ပစ်လိုက်တာတွေဟာ အခုခေတ် Facebook စကားနဲ့ ပြောရင် Unfriend လုပ်တဲ့ အပြုအမူတွေပါပဲ။ အရင်Facebook မပေါ်ခင်က ကျွန်တော်တို့တွေ တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်လို Unfriend လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပြန်သတိရစေဖို့ ဓာတ်ပုံအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။